माछापुच्छ्रे बैंक,टाइम्स रेमिट र ए.एम.भी टेलकम्पनीबीच सम्झौता – Banking Khabar
माछापुच्छ्रे बैंक,टाइम्स रेमिट र ए.एम.भी टेलकम्पनीबीच सम्झौता
बैंकिङ खबर । माछापुच्छ्रे बैंकले टाइम्स रेमीट र ए.एम.भी. टेलकम्पनीसाग सम्झौता गरेको छ । बैंकले बैंकका ग्राहकहरुका साथै सर्वसाधारणका लागि सुविधा स्वरुप रेमिटएप मोबाइल वालेट सेवा सम्बन्धी त्रि–पक्षीय सम्झौता गरेको हो ।
सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा, टाइम्स रेमीटका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक अनिल स्थापित र ए.एम.भी. टेलको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक अनिल शर्माले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता पछि माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहक एवंम सर्वसाधारणले रेमिटएप वालेट प्रयोग गरी विदेशबाट आफ्ना आफन्तहरुलाई रेमिटेन्स पठाउन सक्नेछन् । साथै डोमेस्टिक रेमिटेन्सर बिल भुक्तानीको सुविधा पनि उपभोग गर्न पाउनेछन् । बिल भुक्तानीका अलावा ग्राहकहरुले आफ्नो बैंक खाताबाट वालेटमा तथा वालेटबाट बैंक खातामा आफुले चाहेको रकम समेत स्थानान्तरण गर्न सक्नेछन् । यस रेमिटएप ,आईओएस तथा एन्ड्रोएड दुबै ओपरेटीङ सिस्टम प्रयोगकर्ताको लगि उपलब्ध छ ।
बैंकले ९० वटा शाखा, २ एक्सटेन्सन काउण्टर, १११वटा एटिएमहलगायत ५२ शाखा रहित बैकिङ सेवा समेत गरी जम्मा १४४ स्थानबाट ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सुबिधा प्रदान गरीरहेको छ ।
शेयर बजार दोहोरो अंकले बढ्यो, ९५ करोडमाथिको कारोबार
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई धुलिखेल माउण्टेन रिसोर्टमा विशेष छुट
पूर्णिमा विकास बैंकको नाफा ५ करोड ६७ लाख
देवः विकास बैंकबाट महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको बीमा सेवा पाइने
सुनको भाउ घट्यो, प्रतितोला ५९ हजार २ सयमा कारोबार
शाइन रेसुङ्गा डेभपमेन्ट बैंकले कमायो ३१ करोड ९ लाख मुनाफा
बैंकहरुबीच मर्जरको चर्चा, किन हुन्छ मर्जरमा असफल प्रयास
Email: News:[email protected] Contact-:01-5706402 Marketing:[email protected] Contact-: 01-5705163
सूचना विभाग दर्ता न: २९१र०७३-७४, संचालक तथा सम्पादक: माधव निर्दोष, फोन : 9851215457